သတင်း - စာနယ်ဇင်းစစ်ဆင်ရေးကိုစစ်ဆင်သည်
စောင်းစက်နှင့် Automat Filter ကိုနှိပ်ပါ
အလိုအလျောက် overhead Beam Filter ကိုနှိပ်ပါ
Chamber Filter စာနယ်ဇင်း
အဖွင့်အဖွင့်အပိတ်အလိုအလျှောက် Filter Press
တုန်ခါမှုကိရိယာဖြင့်မြန်ဆန်စွာဖွင့်သည့် Filter Press
အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Filter ကိုနှိပ်ပါ
မြင့်မားသောဖိအားအမြှေးပါး filter ကိုနှိပ်ပါ
Plate နှင့် Frame Filter ကိုနှိပ်ပါ
ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်အသေးစား filter ကိုစာနယ်ဇင်း
(1) ကြိုတင် filtration စစ်ဆေးရေး
၁။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ၊ ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပိုက်လိုင်းများ၊ ဆက်သွယ်မှုသည်ယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ပိုက်နှင့် filter စာနယ်ဇင်းပန်းကန်ဘောင်နှင့် filter အထည်သန့်ရှင်းနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်ဝင်ပေါက်စုပ်စက်နှင့်အဆို့ရှင်များသည်ပုံမှန်လား။
၂။ ဘောင်၏ချိတ်ဆက်နေသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ သော့များနှင့်အခွံမာသီးများလွတ်မနေကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့အားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုညှိနှိုင်း။ တင်းကျပ်ရမည်။ အတော်လေးရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကိုမကြာခဏကောင်းစွာချောဆီထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ reducer နှင့် nut ဆီဆီခွက်ဆီရှိမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ motor သည်ပုံမှန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးပါ။
၁။ External power supply ကိုဖွင့်ပါ၊ motor cabe ကိုပြန်ပြောင်းရန်လျှပ်စစ်သေတ္တာ၏ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အလယ်တန်းပြားကိုသင့်လျော်သောအနေအထားသို့ပြန်သွားပါ၊ ပြီးနောက် stop ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
2. filter filter ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သန့်ရှင်းသော filter filter ကိုချထားပြီးအပေါက်များကိုချိန်ညှိပါ။ စစ်ထုတ်သည့်အထည်သည် filter ပန်းကန်၏တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ထက်ပိုကြီးရမည်၊ ပိုက်တွင်းရှိအပေါက်ထက်ပိုကြီးမည်မဟုတ်ဘဲညဥ့်ယိုစိမ့်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ချောမွေ့စွာခေါက်။ မရ။ ပန်းကန်ဘောင်ကိုတည့်တည့်ထားရပါမည်။
၃။ အလယ်ခေါင်မိုးပြားကိုစစ်ထုတ်သည့်အရာအားဖိအားပေးရန်စစ်ဆင်ရေးအကွက်ပေါ်ရှိရှေ့သို့လှည့်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုရောက်ရှိသောအခါမှတ်တိုင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
1. Filtrate ထွက်ပေါက်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပါ, feed ကိုစုပ်စက်စတင်ပါနှင့်ပြန်လာသောအဆို့ရှင်ကိုထိန်းညှိဖို့တဖြည်းဖြည်း feed ကိုအဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်။ Filtration speed pressure အပေါ် မူတည်၍ ဖိအားသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ အစအ ဦး ၌, filtrate မကြာခဏ turbid နှင့်ထို့နောက်ပိတ်ထားသည်။ အကယ်၍ filter ပြားများအကြားကြီးမားသောယိုစိမ့်မှုရှိပါကအလယ်ခေါင်မိုး၏ jacking force ကိုသင့်လျော်စွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့သော်စစ်ထုတ်သည့်အထည်၏ဆံချည်မျှင်သွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့်စစ်ထုတ်သည့်သုတ်ဆေးပမာဏအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၂ ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတွေ့ရှိပါက open flow type သည်အဆို့ရှင်ကိုပိတ်ပြီးဆက်လက်စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လျှို့ဝှက်စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ပါကပျက်စီးသွားသည့် filter filter ကိုအစားထိုးပါ။ ပစ္စည်းအရည်ကိုစစ်ထုတ်သောအခါသို့မဟုတ်ဘောင်အတွင်းရှိ filter ပိတ်ဆို့မှုပြည့်သွားသောအခါ၎င်းသည်အဓိကစစ်ထုတ်ခြင်း၏အဆုံးဖြစ်သည်။
(4) filter ကိုအဆုံး
1. အစာကျွေးစုပ်စက်ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့် feed ကိုအဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
၃။ filter ကိတ်မုန့်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး filter အထည်၊ filter plate နှင့် filter frame ကိုဆေးပါ။ Plame frame ၏ပုံပျက်မှုမဖြစ်စေရန် stack ။ ၎င်းကို filter ကိုအစဉ်လိုက်နေရာ ချ၍ ပုံပျက်သောအကာအရံများကိုဖိ။ ဖိထားသည်။ site ကိုဆေးကြောပါ။ ထိန်သိမ်းပါ။ ဘောင်နှင့် site ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ပြင်ပ power supply ကိုဖြတ်တောက်ပါ။
သတ်မှတ်ချက်များအားလုံး၏စစ်ထုတ်သည့်စာနယ်ဇင်းပေါ်ရှိ filter ပြားအရေအတွက် ၁။ nameplate တွင်သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်ထက်နည်းရမည်။ ဖိအား၊ ဖိအား၊ ဖိအား၊ စာနယ်ဇင်းဖိအားနှင့်အစာကျွေးသောအပူချိန်တို့သည်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာထက်မပိုစေရ။ စစ်ထုတ်သည့်အထည်ပျက်လျှင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံကိုအချိန်မီအစားထိုးပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေနံကိုဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်တစ်ကြိမ်အစားထိုးသည်။ ဖုန်ထူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းကို ၁-၃ လတစ်ကြိမ်အစားထိုး။ ရေနံဆလင်ဒါနှင့်ရေနံတင်ကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ကြိမ်တည်းသန့်ရှင်းရမည်။
2. အ ၀ င်အထွက်တိုင်းတွင်အရည်ချောဆီ ၂-၃ ဖြင့်ဖြည့်ရမည်။ ၎င်းကိုဝက်အူလှိမ့်၌ကယ်လ်ဆီယမ်အခြောက်ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပြီး၎င်းသည်နှိပ်နယ်မှုအောက်တွင်ထပ်မံဖိအားပေးလုပ်ဆောင်မှုကိုတားမြစ်ထားပြီးအလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ထပ်ဆင့်လွှင့်မှု၏ကိန်းဂဏန်းများကိုညှိနှိုင်းရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
၃။ ဟိုက်ဒရောလစ်စစ်ထုတ်စက်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ဆလင်ဒါလည်ပတ်ပြီးနောက်တွင် ၀ န်ထမ်းများအားနေခွင့်မပြုရန်တားမြစ်သည်။ နှိပ်သောအခါသို့မဟုတ်ပြန်လာသည့်အခါဝန်ထမ်းများသည်စစ်ဆင်ရေးကိုစောင့်ကြည့်ရမည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောဖိအားကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်းမပြုရ။
4. filter filter ၏တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်သည်သန့်ရှင်းပြီးခေါက်သိမ်းထားရမည်။ filter filter သည် main beam နှင့် vertical ဖြစ်မည်။ ၎င်းကိုရှေ့နှင့်နောက်သို့ကပ်ထားရန်ခွင့်မပြုပါ။ မဟုတ်ပါက၎င်းအားဖိအားပေးလုပ်ဆောင်မှုကိုစတင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆွဲပြား၏ထုတ်လွှင့်သည့်ကာလအတွင်းခေါင်းနှင့်ခြေလက်များကို filter ပန်းကန်ထဲသို့ချဲ့ထွင်ရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ ဆလင်ဒါအတွင်းရှိလေကိုညှစ်ရမည်။
filter filter ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းမှရှောင်ရှားရန် filter filter feed များအားလုံးသန့်ရှင်းရမည်။ စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုအချိန်မီသန့်ရှင်းရမည်။
၆။ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သောသေတ္တာကိုခြောက်သွေ့အောင်ထားရမည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုရေဖြင့်မဆေးရ။ Filter Press တွင် short wire နှင့် leakage များအားကာကွယ်ရန် earth wire ရှိရမည်။
ပန်းကန်ဘောင်စစ်ထုတ်စက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချ၍ စီမံရန်၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြားဘောင်စစ်ထုတ်စက်၏နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချိတ်အဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ :
ပန်းကန်ဘောင် filter filter ကို၏ 2.The filter ကိုအထည်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်မကြာခဏအစားထိုးရလိမ့်မည်။ အလုပ်ပြီးနောက်, ကြွင်းသောအရာအချိန်မီသန့်ရှင်းရလိမ့်မည်, ပြန်သုံး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ယိုစိမ့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပန်းကန်ဘောင်ပေါ်တွင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအခြောက်မထားသင့်။ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်ရေချောင်းနှင့်တွင်းအပေါက်များကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းပါ။
3. ဘောင်ဘောင် filter filter ၏ရေနံသို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီအားမကြာခဏပြောင်းလဲပြီးအလှည့်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာချောပါသည်။
4. filter ကိုစာနယ်ဇင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာဆီနှင့်တံဆိပ်ခတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကန့်လန့်ကာများကိုကွေးခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လေ ၀ င်လေထွက်ခြောက်သွေ့သောဂိုဒေါင်တစ်ခုထဲတွင် ၂ မီတာထက်မပိုသောလေသိုလှောင်ရုံတွင်ထားရမည်။
post အချိန်: မတ်လ -24-2021
Hangzhou Filter Machinery Equipment Co. , Ltd. သည်စစ်ထုတ်စက်များထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ အပြည့်အ ၀ အမျိုးအစားစစ်ထုတ်စက်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
RM1204, BLD1, Xinyuanjin Block, Nanyuan လမ်း၊ Yuhang ခရိုင်၊ Hangzhou, China